Ungazongeza njani iidilesi ze-imeyile kwi-LinkedIn | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 30, 2012 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
LinkedIn Utshintshe icandelo longeza iiNxibelelwano kwaye, ngokoluvo lwam, wenza isimumu sokungcwaba indlela yokongeza umnxeba ngedilesi ye-imeyile. Andiqinisekanga ukuba bakwenzile oku kodwa ngoku yinkqubo yamanyathelo ama-4 endaweni yamanyathelo amabini awayeqhele ukuwathatha. Eli mhlawumbi liphepha endilindwendwelayo kakhulu kwi-LinkedIn xa ndibuya kwintetho okanye kwiinkomfa. Ndihamba ngamakhadi eshishini abo bantu ndibaqokeleleyo kwaye ndinxibelelana nabo.
Kwi-interface entsha yomsebenzisi, ukongeza unxibelelwano ngedilesi ye-imeyile, nanga la manyathelo alandelayo:
nqakraza Yongeza Unxibelelwano ekunene phezulu emva kokungena kwi-LinkedIn.
nqakraza i Nayiphi na i-imeyile icon kwicala lasekunene.
phantsi Ezinye iindlela zokudibanisa, nqakraza Mema nge-imeyile nganye.
Chwetheza iidilesi zakho ze-imeyile kwaye ucofe Thumela Izimemo.
tags: yongeza unxibelelwanoemailLinkedIn
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2012 ngo-11: 39 AM
Kutheni ungabakhangeli ngamagama kwaye ucofe ukudibanisa?
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2012 ngo-1: 18 PM
Inye ngexesha? Akho ndlela yimbi! Oku kundivumela ukuba ndizongeze zonke ngaxeshanye.
Ngomhla wama-2 ku-Disemba 2012 ngo-11: 57 AM
Ewe, le yenye yezo ndawo mna kwaye ndiya kuhlala ndingavumelani ngayo. Andibongezi abantu kwi-LinkedIn ngaphandle kokuba "ndidibene" nabo ngokwenyani. Ayisiyo umdlalo wobunzima ukubona ukuba zingaphi iindawo zonxibelelwano endinokuzifumana.
Xa ndisiya kumnyhadala NDINGABUYA ndibuye ndongeze abantu abahlanu njengonxibelelwano. Zonke ezinye zingena kwi-SalesForce nokuba zii-MQLs okanye ii-SQL.
Ngomhla wama-2 ku-Disemba 2012 ngo-12: 22 PM
Ukuba umntu undinika ikhadi lakhe leshishini okanye uqhagamshele nam ngesiza okanye nge-imeyile, sidityanisiwe. Andibusebenzisi kakubi obo budlelwane- kodwa ekukhangeleni izixhobo zinokufika ngokufanelekileyo ngamanye amaxesha. Andikhathalelanga inani loqhagamshelo, ndiyakhathala malunga nokufikelela kwenethiwekhi. Kwaye kuyasebenza!